🥇 ▷ Motorola One Power: 6.2 ″ muuqaal iyo ku dhawaad ​​3,800 mAh batari? (sawir) (la cusbooneysiiyay) ✅
Motorola One Power: 6.2 ″ muuqaal iyo ku dhawaad ​​3,800 mAh batari? (sawir) (la cusbooneysiiyay)
Toddobaadyadii la soo dhaafay waxaan helnay fursad aan ku soo bandhigi karno taleefanka xiga ee la sheegay in Motorola uu soo bandhigi karo, kaasoo loogu magacdaray ‘Power Power’ sida laga soo xigtay wararka qaar ee ku faafay shabakadda. Maanta waxaan dib ugu laabanay si aan ugala hadalno sababta oo ah aaladda uu arkay TEENA, wakaaladda isgaarsiinta Shiinaha, oo soo jeedisay midkeeda imaatin dhow suuqa.
Waxaad ka arki kartaa xaashida shahaadada Motorola One Power halkan sawirka: run ahaantii, maahan wax tilmaamaya maxaa yeelay waxay soo sheegtaa oo keliya i noocyada shabakadda ee taageera qalabka. Taabadalkeed, waxa matalaya codsiyada shahaadada ayaa aad uga sii habboon, maxaa yeelay waxay ka tarjumaysaa doonista Motorola si dhakhso leh loo bilaabo taleefanka casriga ah.
Marka loo eego macluumaadkii hore ee shabaqa soo taabtay, Motorola One Power waa inay iskeeda u soo bandhigtaa SoC Snapdragon 636, 4 GB of RAM iyo 64 GB of xasuusta gudaha, soo bandhigay ka 6.2 inji Full HD +, laba kamarad gadaal ka socota 12 MP +5 MP iyo baytar ka yimid 3,780 mAh. Marka la eego nidaamka qalliinka, shakiga ayaa wali ku jira is dhexgalka Android Oreo 8.1 iyo Android One.
Xilligan la joogo ma ogin macluumaad intaas ka badan oo ku saabsan aaladdaan iyo xitaa haddii Motorola wuxuu damacsan yahay inuu sidoo kale ku soo bandhigo suuqa Yurub.
Waxaa jira xogo cusub oo ku saabsan taleefankan casriga ah, kaasoo wax yar saxaya duritaanka, gaar ahaan baatariga, oo lagu soo waramayo inuu yahay 4,850 mAh, oo runtii aad uga badan magaca shayga.
Bandhiga 6.2-inji ah waxaa lagu xaqiijiyay 2246 x 1080 pixels resolution iyo darajadda waxay ka koobnaan doontaa 8 megapixel camera hore. Midka ugu weyn wuxuu bedel ahaan noqon lahaa 16 oo aan 12 ahayn, waxaa isku xiraya mid qoto dheer oo ah 5 megapixels. Xaraashka RAM waa inuu ahaadaa 3, 4 6 GB iyo xusuusta gudaha ayaa laga heli karaa labadaba 32 iyo 64 GB.